मधेशी मोर्चाको ठेक्का किन दिइयो प्रचण्डलाई ? – बी.पी. साह – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १३:१४ English
मधेशी मोर्चाको ठेक्का किन दिइयो प्रचण्डलाई ? – बी.पी. साह
मधेश आन्दोलन किन भयो र कसले ग¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजौं । समुदाय पिच्छे र भुगोल पिच्छे यसको उतर फरक आउन सक्छ । तर मधेशी जनताको भने उत्तर उस्ता उस्तै आउन सक्छ । त्यो उत्तर हुन सक्छ– ‘खस शासकले खोसेको मधेशको अधिकार प्राप्तीका लागि मधेश आन्दोलन भएको हो र मधेशी सपुतहरूले आन्दोलन गरेका हुन् ।” हुनत् मधेश आन्दोलनका बेला र मधेश आन्दोलन पश्चात मधेशवादी बनेका नेताहरूले पनि त्यही भन्छन् । संविधानसभाको निर्वाचत ताका तथा मधेश केन्द्रीत भाषणमा पनि ती नेताहरूले खस शोसक र शासकबाट मधेशलाई मुक्ति दिलाउन पर्छ भन्ने वाक्य हजारौं पटक उचारण गरि सकेका छन् । मधेश आन्दोलन जस्को विरूद्धमा भयो अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा त्यसकै शरणमा पुगेको छ ।
हिजोसम्म जसलाई आफ्नो शत्रु ठान्थे मधेशी नेताहरूले, अहिले उनकै शरणमा सम्पूर्ण मधेशवादलाई सुम्पेर बसेका छन् । खस शासकका विरूद्धमा खनिएका मधेशवादी नेताहरू पुनः त्यही खस नेताहरूलाई आफना प्रभु ठानेका छन् । आफनो शक्तिको यकिन गर्न नसकेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मार्चाका नेताहरू मधेश आन्दोलनका शहीदहरूको बलिदान र डेढ करोडभन्दा बढि मधेशी जनताको मागलाई खस बाहुणहरूलाई ठिक्का दिएका छन् । संघीयता पक्षधरहरूको बथानमा भनि खोलिएको खसहरूको जमातमा मधेशी मोर्चाका नेता आफनो शक्ति र मधेश जनताको चाहनालाई भुलेर सक्ता जोगाउनमा लागेका छन् । सरकार टिकाउन गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल भएका मधेशी मोर्चाका नेताहरूले संघीयताका कुरालाई भुलेर हाल पाएको मन्त्रालयहरू कायम गर्नमा लागेका छन् । मधेशमा एउटा चर्चित भनाई छ,–‘‘जेकरे खातीर भिन भेली सेहे परल बखरा ।” अथार्त जसको लागि अलग भयौं त्यही नै भागमा प¥यो । मधेशी जनताहरूले जसबाट मुक्त हुन मधेश आन्दोलन गरे, मधेशवादी नेताहरूले फेरी मधेशलाई तिनीहरूकै हातमा सुम्पेका छन् । मधेश आन्दोलनका प्रथम शहीद रमेश महतोलाई हत्या गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादी, मधेशी जनतामाथि अत्याचार गर्दा गौरमा मधेशी जनाले प्रतिकार गर्ने एकीकृत माओवादी, त्यही एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हातमा मधेशी मोर्चाले मधेशलाई सुम्पेका छन् । आफनै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका अध्यक्षहरू मध्ये कसैलाई संयोजक मान्न नचाहने मोर्चाका नेताहरू किन प्रचण्ड अर्थात खस बाहुणलाई अध्यक्ष माने त ? मधेशी मोर्चाको बागाडोर सम्हाले पनि प्रचण्डले नै मधेशको पनि ठिक्का लिएको देखिन्छ । संयोजक प्रचण्ड भएदेखिको राष्ट्रिय छलफल वा बहसमा ती खस पार्टीका तीन नेता पुग्ने गरेका छन् । तीनीहरूले नै मधेशी, आदिवासी, जनजातिको मुद्दामा छलफल गर्छन् । बास्तवमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीबाट अलग भएका मधेशवादी, आदिवासी जनजाति र अन्य स–साना पार्टीले पनि त्यही चाहेको हो त ? त्यही चाहेको हो भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका अध्यक्षहरू आ–आफनो माओ पार्टीमा फर्के हुन्छ ।
आम जनताले मधेशी नेताहरूलाई सत्ताका भक्त भनेको सही पो रहेछ । अर्कोतर्फ केही मधेशवादी नेताहरूलाई चैते मधेशवादी भनेको र अहिले पनि खशको भक्त रहेको भन्ने भनाई पनि सही हो । खस–बाहुणकै छत्रछांयामा पालिएका र खसकै शरणमा हुर्केका महन्थ ठाकुरलाई अहिले मधेशको मसिहा भनिदै छ, महन्थ ठाकुरमा पनि खसको लक्षणहरू प्रस्तत छ तर उनलाई किन मोर्चाको अध्यक्ष मानिएन ? किन प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानियो त ? हुन त आकलझुकल मिडियामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका संयोजकका रूपमा प्रस्तुत हुने विजय गच्छदार पनि त्यही खस–बाहुणहरूको बथानबाट आएका भगौडा हुन् , उनलाई किन मोर्चाको संयोजक मानिएन ? मोर्चाका अन्य अध्यक्षहरूले त ठुला मधेशवादी भएको दाबी गर्ने प्लेट फर्मनै पाएका छैनन् ती बिचारहरूलाई के दोष दिनु । २२ बर्षदेखि मधेशको ठिक्का लिएर हिडेका राजेन्द्र महतो त विसुद्ध मधेशवादी हुँ भन्ने दाबी गर्छन् तर पनि किन उनले प्रचण्डलाई नै मधेशवादीको ठिक्का दिए त ? यी प्रश्नहरूको जवाफ लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आम मधेशीलाई दिनु पर्छ ।
१४ आश्विन २०६९, आईतवार १३:२२ मा प्रकाशित